स्वास्थ्यमा प्रशासनका केदारबहादुर अधिकारी सचिव – Health Post Nepal
स्वास्थ्यमा प्रशासनका केदारबहादुर अधिकारी सचिव
२०७५ मंसिर २३ गते १५:५७
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई सरुवा गरेको छ ।
सहसचिवका रुपमा २ वर्ष स्वास्थ्यमा बिताएका अधिकारीले स्वास्थ्यसचिव बन्न पटक-पटक प्रसास गरेका थिए । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको भनिए पनि हालसम्म स्वास्थ्यमा पदबहालीका लागि भने अधिकारी पुगेका छैनन् । उनले पत्र नपाइसकेको जनाएका छन् ।
पछिल्लोपटक विभागीय मन्त्रीको आग्रहमा स्वास्थ्यसचिव सरुवा गरेर सरकारले पुनः प्रशासनको सचिव ल्याएको हो । यसअघि २८ महिना शान्तबहादुर श्रेष्ठले स्वास्थ्यमा सचिव सम्हालेका थिए । चिकित्सक संघको लामो संघर्षपछि फेरि डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई स्वास्थ्यसचिव बनाइएको थियो ।
२८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीकाे सरुवासँगै मन्त्रालयमा सचिव अन्योल थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निमित्तसमेत कसैलाई नदिएपछि उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले १२औँ तहका डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई मन्त्रिपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नगर्दासम्मका लागि भन्दै निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए । डा. चौधरीको सरुवा विवाद भने अदालतमै विचाराधीन छ ।